နေရာ ပြောင်းပါတော့မယ် | our notes for our youngers
Filed under: Other — sevenlamp @ 12:15 PM
ကျွန်တော့် ဘလော့လေးကို အခုသုံးနေတဲ့ wordpress ကနေ ကိုယ်ပိုင် site လေးကို ပြောင်းတော့မလို့ပါ။ http://www.sevenlamp.co.cc ပါ။ အခုလက်ရှိ develop လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပိုဒ့်တွေ လောလောဆယ် မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ဘလော့ အသစ်မှာ နောက်အကျဆုံး 1 Feb 2010 ထားပြီး ပိုဒ့်တွေ စပြီး တင်ပါ့မယ်။ အခု ဒီဘလော့ အဟောင်းလေးက ပိုဒ့်တွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ရွှေ့ထားပါ့မယ်။ ဘလော့ အသစ်လေးကို လာရောက် ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခုမှ developing လုပ်တုန်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင် သည်းခံပြီး ထောက်ပြပေးကြပါခင်ဗျာ။ အကြံဥာဏ်လေးများလည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
I amabeginner of c#.net and i am studying ur lesson well and i want to ask some lessons what i don’t know and i want to ask some advice from you to learn web development language. so please gave me ur e-mail add and i also live in DaL La,myoma(2).
Comment by maycho — February 23, 2010 @ 11:45 AM
hello ma maycho,
my email address is sevenlamp@gmail.com. but i use it to check mail, not to use gtalk. so, please send mail if you have something to know about asp.net. i will surely reply to you withing 1 or2days.
btw, i’m very glad about you are living in myoma(2), dalla.
Comment by sevenlamp — March 1, 2010 @ 11:49 AM
အကို. (www.sevenlamp.co.cc)site က၀င်လို.မရဘူးဖြစ်နေတယ်. အကို. ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ညီမက C# ကိုလေ.လာနေတာပါ၊ အကိုသင်တာတွေကအတော်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်၊ စာမေးချင်လို.ဘယ်လိုမေးရမလဲ?
Comment by Thazin — May 20, 2010 @ 3:18 PM
http://www.sevenlamp.co.cc site ရဲ့ hosting က ကျွန်တော်တို့ ရုံးက boss ရဲ့ Thai က ဆာဗာမှာ တင်ထားတာပါ။ အခု အဲ့ဒီ server က မသုံးတော့ဘူး ဆိုတော့ ဘုံပျောက်ပြီပေါ့။ 😦
အခု ကျွန်တော် sevenlamp.com domain ကို ၀ယ်ထားပြီးပါပြီ။ hosting ကိုလည်း ၀ယ်သုံးဖို့အတွက် စဉ်းစားထားပါတယ်။ ခန့်မှန်းချေ ဇွန်လ အတွင်းမှာ live ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ sevenlamp.com မှာ Blog အပြင် Question & Answer နဲ့ တစ်ခြား ဟာတွေကိုလည်း ထည့်သွားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ စာမေးချင်တယ်ဆိုရင်၊ sevenlamp@gamil.com (or) admin@sevenlamp.com ကို email ပို့ပြီး မေးနိုင်ပါတယ်။
i’m surely will continue my sharing..
Comment by sevenlamp — May 21, 2010 @ 9:39 AM
your articles are great! Looking forward to read more at your website. Cheers!!!
Comment by czw — June 6, 2010 @ 12:25 AM
the new place is not stable for me. so, now i try to change new place again. 🙂
Comment by sevenlamp — July 8, 2010 @ 9:31 AM